Cele News Archives - Page4of 278 - Cele Gabar
Home/Cele News (page 4)
အပြုံးတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ ကြည်နူးဖွယ်အပြည့်မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေခဲ့တဲ့ ထက်ယံ
5 days ago	Cele News
ပရိသတ်ကြီးရေ ထက်ယံကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်သမျှသီချင်းတိုင်းကလည်း ပေါက်ပြီး လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေးကို နာမည်ကြီးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ယံကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက သူ့ရဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲခဲ့ပြီး လက်ထပ်ပွဲကျင်းပတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို Surprise တိုက်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အံ့သြဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်ညီလှတဲ့ အပြင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်ကြသူနှစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်းဖက်တဲ့ ပွဲလေးကတော့ တကယ်ကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း အားကျနေခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ထက်ယံကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပွဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရွှေလက်တွဲအခမ်းအနား ဗီဒီယိုအတိုလေးတစ်ခုကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက ထက်ယံတို့ အတွဲလေးကို …
Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကို ပြိုင်ခဲ့တာ (၁)နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နေခဲ့စဉ်က အမှတ်တရတချို့ကို ပြန်လည်မျှဝေလာခဲ့တဲ့ သူဇာဝင့်လွင်
6 days ago	Cele News
ပရိသတ်ကြီးရေ သူဇာဝင့်လွင်ကတော့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကို မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာဂုဏ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း Role Model တစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဇာဝင့်လွင်ကတော့ ပြိုင်ပွဲကြီးကို သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့စဉ်မှာ အခက်အခဲတွေများစွာနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အတွက် တကယ်ကိုပဲ ပရိသတ်တွေက သူဇာဝင့်လွင်အတွက် ဂုဏ်ယူခဲ့ကြရပါသေးတယ်။ သူဇာဝင့်လွင်ကတော့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကို ပြိုင်ခဲ့တာ (၁)နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ ခုချိန်မှာတော့ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အမှတ်တရတွေကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ “ဒီနေMiss Universe ပြိုင်တာ ၁နှစ်ပြည့်သွားပီဆိုတော့ သူဇာပြိုင်ပွဲတုန်းကပုံလေးတွေကို စာလေးတွေနဲ့ အမှတ်တရတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူဇာ့ကိုအခုချိန်ထိအားပေးကြတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Love you all ” ဆိုပြီးတော့လည်း …
မြန်မာစိတ်ရင်း ပရဟိတအဖွဲ့နဲ့ အတူ ပရဟိတထမင်းဆိုင်လေးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ မေပန်းချီ
ပရိသတ်ကြီးရေ မေပန်းချီကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေပန်းချီကတော့ ရိုးသားပွင့်လင်းပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ ခက်ခဲနေတဲ့သူတိုင်းကို ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ အလှူအတန်းတွေလည်း ရက်ရောလှတဲ့ မေပန်းချီကတော့ လတ်တလောမှာလည်း မွန်မြတ်လှတဲ့ ပရဟိတအလုပ်လေးကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မေပန်းချီကတော့ “မြန်မာ့စိတ်ရင်း” ပရဟိတအသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စားချင်သလောက်စားပေးချင်သလောက်ပေးသားသတ်လွတ်ထမင်းဆိုင်လေးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်လေးရဲ့ တည်နေရာကတော့ တောင်ဒဂုံ ၅၆ရပ်ကွက် ပုဂံလမ်းမကြီးပေါ် ဝနဝါသီဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်တဲ့။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ မေပန်းချီတို့ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကတော့ (၇)ရက်သားသမီးမည်သူမဆို စားသုံးလို့ ရပါတယ်တဲ့။ တကယ်ကို မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလေးပါ …
” မြန်မာဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာ ကျက်သရေရှိရှိလှနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်လာခဲ့တဲ့မေမီကိုကို”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီး​ေရ​ေမမီကိုကိုဟာဆိုရင် လူကြီးလူငယ်မရွေး အားပေးခံရတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သူမပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ပျားရည်အိုင်ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ လူငယ်တွေသာမက လူကြီးတွေပါ အားပေးနှစ်ခြိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြိုင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ သူမအတွက် ပရိသတ်သိလာစေတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ Star Awards 2018 မှာ သူမဟာ Best TV Series Actress Award ဆုကိုရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်တွေအပေါ် အရမ်းအလေးထားတဲ့သူ ဆိုပြီး ပရိသတ်အချစ်အပြည့်အ၀ရထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အခြား​သောဇာတ်လမ်းတွဲတွေများစွာလည်း ပရိသတ်တွေကအားပေးဝန်းရံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး မကြေးစည်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပရိသတိတွေအားပေးခံခဲ့ရသူလေးပါ။ မကြာသေးမီကလည်း သူမကိုယ်တိုင် Script ရေးသားထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေလာ်းထွက်ရှိထားသူပါ။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ကာ ကျက်သရေရှိလှတဲ့ ဟန်ပန်လေးတွေနဲ့ အလှပုံလေးတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ တကယ်ကိုမြန်မာဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာ ကျ က်သရေရှိရှိလှနေတဲ့ မေမီကိုကိုရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုချစ်ရင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးCeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ။ Ko-CeleGabar …
“မကြာခင်မှာ Cover သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်သီဆို ထွက်ရှိလာမယ့်အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလာတဲ့ ဂျူနီယာချစ်ကောင်း”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ဂျူနီယာချစ်ကောင်းကတော့နာမည်ကြားလိုက်ရုံနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကချစ်ရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီးဦးချစ်ကောင်းရဲ့သားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အိမ့်ချစ်ရဲ့ချစ်ရတဲ့မောင်လေးဖြစ်ပြီး အစ်မဖြစ်သူအိမ့်ချစ်နဲ့လည်းသီချင်းလေးတွေဖန်တီးသီဆိုနေသူပါ။ လက်ရှိမှာလည်း” Cover သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်လာမယ်🌚🤍”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူသီချင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ဘယ်လိုသီချင်းကို Coverပြန်ဆိုမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့မှတ်ချက်တွေပေးကာ မေးခွန်းထုတ်နေကြတာပါ။ ဖခင်ရဲ့အနုပညာအမွေကို ခြေရာနင်းနိုင်တဲ့ အိမ့်ချစ်နဲ့ဂျူနီယာတို့ကတော့ တကယ့်ကိုဆွဲ​ေဆာင်မှုရှိတဲ့အသံပိုင်ရှင် တွေပါပဲနော်။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း ဂျူနီယာချစ်ကောင်းရဲ့Cover သီချင်းလေးကို စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။ Koe-CeleGabar Source-JuniorChitKaung “မၾကာခင္မွာ Cover သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္သီဆို ထြက္ရွိလာမယ့္အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလာတဲ့ ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္း” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္းကေတာ့နာမည္ၾကားလိုက္႐ုံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကခ်စ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္ႀကီးဦးခ်စ္ေကာင္းရဲ႕သားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။အိမ့္ခ်စ္ရဲ႕ခ်စ္ရတဲ့ေမာင္ေလးျဖစ္ၿပီး အစ္မျဖစ္သူအိမ့္ခ်စ္နဲ႔လည္းသီခ်င္းေလးေတြဖန္တီးသီဆိုေနသူပါ။ လက္ရွိမွာလည္း” Cover သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္လာမယ္🌚🤍”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔အတူသီခ်င္းအတြက္ျပင္ဆင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း ဘယ္လိုသီခ်င္းကို Coverျပန္ဆိုမလဲဆိုတာကိုစိတ္ဝင္တစားနဲ႔မွတ္ခ်က္ေတြေပးကာ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကတာပါ။ ဖခင္ရဲ႕အႏုပညာအေမြကို ေျခရာနင္းႏိုင္တဲ့ အိမ့္ခ်စ္နဲ႔ဂ်ဴနီယာတို႔ကေတာ့ တကယ့္ကိုဆြဲ​ေဆာင္မႈရွိတဲ့အသံပိုင္ရွင္ ေတြပါပဲေနာ္။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း …
” မိုးရေထဲမှာလည်း ဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင် ကြိုးစားသရုပ်ဖော်နေတဲ့ ရှူတင်ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေကို တင်လာတဲ့ချမ်းမင်းရဲထွ​ဋ်”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ချမ်းမင်းရဲထွ​ဋ်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ မျက်လုံး မျက်ခုံးအပြင် နိုင်ငံခြားမင်းသားတစ်ဦးလို ထူးခြားတဲ့ ပသိုင်းမွှေးရေးရေးလေးတွေက သူ့ရဲ့ တမူထူးတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေပါပဲနော်။ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်လို့ပရိသတ်တွေလက်ခံလာတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ ” ည ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “သမ္မတကြီးထံပေးစာ” ဇာတ်ကားကြီးမှာ အလင်းရောင် ၊ ဖွေးဖွေး တို့နှင့်အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့အပြင် ကြော်ငြာphoto shootingတွေလည်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အခုချိန်မှာအနုပညာခြေလှမ်းတွေကျဲနေပေမယ့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကတော့လျော့မသွားခဲ့ပါဘူးနော်။ ချမ်းမင်းရဲ့ထွဋ်ကတော့ လက်ရှိမှာ ရိုက်ကူးရေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပြီး ”မိုးရေထဲမှာလည်းငိုဖူးခဲ့ပါပြီ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ မိုးတွေအသည်းအသန်ရွာနေတဲ့အချိန်မှ ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ရှူတင်ပူံရိပ်လေးကိုတင်လာခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ်တေွလည်း မိုးရေထဲမှာကြိုးစားသရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ချမ်းမင်းရဲ့ပူံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှူနိုင်ဖိူ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Koe-CeleGabar Source – ChanMinYeHtut ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” မိုးေရထဲမွာလည္း ဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသ႐ုပ္ေဖာ္ေနတဲ့ ရႉတင္႐ိုက္ကြင္းပုံရိပ္ေတြကို တင္လာတဲ့ခ်မ္းမင္းရဲထြ​ဋ္” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ခ်မ္းမင္းရဲထြ​ဋ္ကေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလြန္းတဲ့ …
” ချစ်ရတဲ့ညီမငယ်လေးအတွက် ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိပြီးဆင်ခြင်လိုက်နာရမယ့် အသိတရားတွေကို ပြောပြသင်ကြားခဲ့တဲ့ ဘီလီလမင်းအေး”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ဘီလီလမင်းအေးကတော့ Myanmar idol အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်း အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့သူပါ။အခုဆိုရင်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီချင်းတွေနဲ့ဂီတလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရကာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိူအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့ချစ်ရတဲ့ညီမလေးကို”သို့✍🏻 ချစ်ရတဲ့ညီမလေးရေ Billy Su Than Tharညီမလေးအတွက် မဖူးစာရေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပါ။ ၂. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားပါ။ ၃. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ပါ။ ၄. ဘာနဲ့မှဘာအကြောင်းနဲ့မှ ဘယ်သူနဲ့မှမနှိုင်းယှဥ်ပါနဲ့။ ၅. လူရောစိတ်ပါကျန်းမာလှပအောင်နေပါ။ ၆. ကိုယ့်Style နဲ့ကိုယ်နေပါ။ ၇. ဝါသနာအတွက်အချိန်ပေးပါ။ ၈. ကိုယ်ပိုင်အချိန်ထားပါ။ ၉. မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုပါ။ ၁၀. စာဖတ်ပါ။ ၁၁. မကောင်းတာတွေချည်းပြောတတ်တဲ့ Negative သမားတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်ဝေးဝေးနေပါနော်။ ချစ်တဲ့ …
” စိမ်းစိုနေတဲ့ရှူခင်းတွေကိုနောက်ခံထားပြီး မြင်သူတိုင်းငေးမောရလောက်တဲ့ဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ကာ အမှတ်တရရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်လာခဲ့တဲ့ရေဗက္ကာဝင်း”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ရေဗက္ကာဝင်းကတော့စိတ်ပျိုကိုယ်နုဆိုသလို ပရိသတ်တွေရှေ့စတင်ရောက်ရှိခဲ့စဥ်ကအတိုင်းနုပျိုနေဆဲအဆိုတော်တစ်လက်ပါ။ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေနားထဲစွဲစေတဲ့ အမျိုးသမီးအဆိုရှင်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်းအမြဲတလေးတစားဆက်ဆံတတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေဗက္ကာဝင်းကတော့အမြဲသူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ပရိသတ်ကိုအမြဲ​တင်ပေးလေ့ရှိသူလေးပါ။ဒီနေ့မှာလည်း သူမကတော့ မြစ်ကြီးနားကိုရောက်ရှိနေစဥ် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ တကယ့်ကိုဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက်လိုနုပျိုကာ စိမ်းစိုနေတဲ့ ရှူခင်းတွေကြားမှာ တော်ဝင်မင်းသမီးလေးတစ်ပါးအလားထင်မှတ်ရလောက်အောင်လှပတဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းရေဗက္ကာဝင်းရဲ့ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ကာ လှပတဲ့ပုံရိပ်လေးကို သဘောကျရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Koe-CeleGabar Source – RebeccaWin ” စိမ္းစိုေနတဲ့ရႉခင္းေတြကိုေနာက္ခံထားၿပီး ျမင္သူတိုင္းေငးေမာရေလာက္တဲ့ဝတ္စုံေလးကိုဝတ္ဆင္ကာ အမွတ္တရ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကိုတင္လာခဲ့တဲ့ေရဗကၠာဝင္း” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ေရဗကၠာဝင္းကေတာ့စိတ္ပ်ိဳကိုယ္ႏုဆိုသလို ပရိသတ္ေတြေရွ႕စတင္ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ကအတိုင္းႏုပ်ိဳေနဆဲအဆိုေတာ္တစ္လက္ပါ။ အသံပါဝါေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ပရိသတ္ေတြနားထဲစြဲေစတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအဆိုရွင္ထဲကတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ပရိသတ္ေတြအေပၚမွာလည္းအၿမဲတေလးတစားဆက္ဆံတတ္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရဗကၠာဝင္းကေတာ့အၿမဲသူမရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကို ပရိသတ္ကိုအၿမဲ​တင္ေပးေလ့ရွိသူေလးပါ။ဒီေန႔မွာလည္း သူမကေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားကိုေရာက္ရွိေနစဥ္ ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကိုတင္လာခဲ့တာပါ။ တကယ့္ကိုဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးတစ္ေယာက္လိုႏုပ်ိဳကာ စိမ္းစိုေနတဲ့ ရႉခင္းေတြၾကားမွာ ေတာ္ဝင္မင္းသမီးေလးတစ္ပါးအလားထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္လွပတဲ့ …
” ​မန္တလေးရောက်ခိုက် ဖခင်ကြီးနဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေရိုက်ကူးကာ ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေခံယူခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင်”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်သဇင်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းအပြင်ပညာရေးဘက်မှာလည်း ထူးချွန်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ အလှူအတန်းဆိုရင်လည်း လက်မနှေးဘဲ ပရဟိတတွေများစွာလုပ်​ဆောင်လေ့ရှိသူပါပဲနော်။ခင်သဇင်ကတော့ ” ထာဝရနှောင်ကြိုး”ဇာတ်လမ်းတွဲကနေ ပရိသတ်တွေပိုမို အားပေးခြင်းခံလာရတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ ပရိသတ်တွေတခဲနက်အားပေးခဲ့တဲ့ MRTV4ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ” အချစ်ဖွဲ့လေညင်း “ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းမိုးကလျာဆိုတဲ့ ဗီလိန်ကာရိုက်တာအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ​ပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့ ဟာကွက်မရှိတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမြဲအားပေးလျက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာ ယောကျ်ားလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေလည်း များစွာပါဝင်နေတာပါ။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးလည်းလိုက်စားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ”အဖေ အမြဲသင်တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်..လူတစ်ဦးက ကိုယ့်မေတ္တာ နဲ့ မထိုက်တန်တော့ဘူး ထင်ရင်ချစ်ခြင်းရဲ့ အလွန် မုန်းခြင်းကို မထားပါနဲ့တဲ့..ဥပေက္ခာထားပါတဲ့.. ဥပေက္ခာဆိုတာ ဂရုမစိုက်တော့တာပစ်ထားလိုက်တာ လျစ်လျှူရှုလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့.. သူ့အပေါ် စေတနာ ဆက်ထားရင်း …
ရတနာမိုင်ရဲ့ သီချင်းလေးကို အမိုက်စားပြန်လည် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သွန်းမြတ်ကြယ်စင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ပရိသတ်ကြီးရေ သွန်းမြတ်ကြယ်စင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းလှပြီး စကားလည်း တတ်လှတဲ့အပြင် အနုပညာအရည်အသွေးလည်း အပြည့်အဝလွန်းလှတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာကို ဝါသနာပါတဲ့ သွန်မြတ်ကြယ်စင်ကတော့ လတ်တလောမှာ ရတနာမိုင်ရဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သီချင်းစာသားနဲ့ဘိုက်ဖက်ညီအောင်သရုပ်ဆောင်ကာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ သွန်းမြတ်ကြယ်စင်လေးရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုက တကယ်ကို ချစ်စဖွယ်အပြည့်နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သွန်းမြတ်ကြယ်စင်ရဲ့ ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှု့ပြီးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သွန်းမြတ်ကြယ်စင်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံကိုကြည့်ပြီး အသဲတယားယားနဲ့ အချစ်ပိုနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြိးတွေလည်း သွန်းမြတ်ကြယ်စင်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရှု့လို့ရအောင် မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ﻿ Source – Thoon Myat …